Waxay iska indha xaqiiqda ah in wakhtiga ay dadku rumaystay oo dhan oo dhulka ku wareegsan tahay. Xitaa Kitaabka Quduuska ah ka hadlaa dunida wareegsan!
been ah oo dalka u noqon lahaa guri ka yimaadeen cawaan oo doonayay in ay dilayo iyo Nasaara jees jeesi jireen. Sidaas been ah asal ahaan ka soo horjeeda iimaanka Christian! Been waxa uu leeyahay qaar ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah sidaas isku duubay oo aqbalay!
Sida aad ogtahay, waxaan leedahay article iyo video ogaaday in aan dhulka ku wareegsan tahay. baahida loo qabo Tani ma noqon saynisyahan a si ay u fahmaan. Waxaa laga yaabaa inaad u bixi habeenkii cad oo kor eega xiddigaha aad ka arki kartaa in ay kordhiso dunida dacaladeeda.
Laakiin marka aad kor u qaado arrintan sida kiciyay qaar ka bilaabay isla markiiba oo isku dayaya in la wacdigii ku dhow waswaaska heli intiisa kale oo naga mid ah in ay aaminsan yihiin in dhulka a flat. Sida caadiga ah, ma ay joogaan dad badan oo ka naadiyaan bidcinimo, laakiin waxay u khuduuca cajiib ah. Iyo dood ma ku filan, oo ay si cad u samayn, markaas hal ama dagaal. Oo kanu waa wax shaaca ka qaaday in uu jiro qalad ah wax caafimaad qabin.
Mid ka mid ah qabaa waxaa laga yaabaa in aysan macno ah haddii dadka Masiixiyiinta ah qaar ka mid ah, (waayo, runtii waxaa jira qaar ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah) rumeeyey dhulka a flat, laakiin ma aha in aan waxba galabsan. Sii daynta been, ka dibna waa ay fududahay in aad ha waxyaabo kale. Waxaa jira a Taageerayaasha dhulka guri, sida ma aaminsani in Holocaust ah lix malyan oo Yuhuud dhacay intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida.
Been The of cawaan
Waxa ay ahayd ka dib markii ay 1800 sida cawaan la iman been ah in dadka Masiixiyiinta ah waxay aaminsan yihiin ama la rumaysan yahay in dhulka uu yahay guri. Been laga yaabaa inaad maqashay in Dhexe Christian ah qarniyadii kaniisadda aaminsan yahay in dhulka a flat oo wadaaddadiina waxay ka digay Christopher Columbus ay u safraan adduunka oo dhan, maxaa yeelay, waxay ka cabsadeen reer ka laayeen guri ka mid ah dhulka ka dhacin. Laakiin taasi waa been oo waxaa lagu magacaabaa factoid . Taasu waa been in uu leeyahay xaqiiqooyinka noqon laakiin weli kaliya been.
Iyo da'a been ah in aad noloshaada, waxa rumaysadkiinnu Christian karaan wareer si aad u bilowdo shaki Ciise iyo ugu danbeyn ka tago isaga oo laga yaabo. Sidaas waa mid aad u halis ah. Waxaa jira villoläras gool kasta oo aad ka heli doono qasan, bilaabaan in ay shaki si aad u tago iimaanka Ciise si aad u ma badbaadi doonaa.
Wacdiyey dhulka wareegsan
wacdiyada ee qarniyadii dhexe oo lagu qabtay liddi ku ah waxa badan ayaa aaminsan in aan in Laatiin laakiin in lahjadeed mucayan ah. Oo wacdinta ayaa lagu daweeyey nidaamka abuuridda, oo ay ku jiraan qaab spherical dhulka.
Norway Konungaspegeln ka 1200s uu yahay daabacaadan ah grassroots in sheegaye qaab dhulka iyo waxbarasho u sharaxayaa akhristaha in uu ka fekero dhulka sida tufaax laalaadeen si xor ah. Haddii aad markaa iftiin ku wareegsan inankeeda, sida habeen iyo maalinba, iyo khilaafaadka cimilada u dhexeeya dalalka waqooyiga Yurub iyo dalalka ku wareegsan dhulbaraha for sharxay.
Petrus de Dacia, caadi ahaan loo gudbiyaa sida qoraaga ugu horeeyay ee Sweden, ayaa ahaa wadaad Dominican ka soo Gotland. In qoraalladiisa yihiin qaab kubada dhulka cad.
Wadini laakiin koonkan jirin
Abaalkaaga Mu'miniinta ay sheegayaan in dhulka waa disc wareega guri iyo disc tani waa qubbad. In qubbad this, qorraxda waa xiddigaha iyo dayaxa ku lifaaqan laakiin tani waa in ay Ilaah ka dhimina. Ilaah rumaysadka this uma abuurin caalamka, laakiin waxa uu abuuray ciid la qubbad iyo xiddigaha qaar ka mid ah, Qorraxda iyo dayaxa on. Ma jiraan wax in boos.
Wixii Ilaah yar, Anigu ma aaminsani. Waxay ku hoos Ilaah. Waxaan aaminsanahay in Ilaah awood weyn adduunka abuuray oo dhan.
Tani waxay ahayd mid ka mid ah sababta aan u helay badbaadiyey markii aan maqlay oo ku saabsan jacaylka Ilaah. Waxaan u maleeyay in haddii Ilaah jirta, waa inuu ku abuureen weyn oo dhan taas aawadeed. Sayidka caalamka dhulka iyo wax walba. Oo Ilaah weyn oo dhan i jecel yahay.
Si aad rumaysan tahay in Ilaah ayaa abuuray disc a flat la qubbad ka mid ah xiddigaha iyo dayaxa iyo qorraxda ku xiran yihiin in ay tahay in si dhab ah loo yareeyo Ilaah weyn oo xoog leh our. My Ilaah waa u awood badan oo sidaas u weyn oo uu ku abuuray koonkan oo dhan iyo dhulka la Kalimadiisii!
Cibraaniyada 13: 3 "Rumaysad ayaynu ku garanaynaa in duniyooyinka lagu abuuray erayga Ilaah , sidaas daraaddeed waxa la arki karo oo aan ka mid ah waxa aan arki karnaa."
Taageerayaasha Earth Flat diidi jiritaanka koonkan ee. Laakiin halkan waxaa iska cad in duniyooyinka lagu abuuray erayga Ilaah. caalamka ka jira shaki - Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay.
Rumaysad ayaynu ku garanaynaa
Haddii aad hadda ayay ku adag tahay in ay fahmaan in Eebe u abuuray koonkan oo dhan baaxad weyn, waxaad camal falaysaan waa waxa aan ku akhriyey aayadda:
Cibraaniyada 13: 3 " Rumaysad ayaynu ku garanaynaa in duniyooyinka lagu abuuray erayga Ilaah ..."
Waa in aan rumaysan ! Oo rumaysad buu ku fahmi na in duniyooyinka lagu abuuray erayga Ilaah. Haddii aad rabto in aad fahmi: iimaanka! By iimaanka, oo aad fahmi karto. Laakiin ma aad fahmi karto iimaanka hore. Faith had iyo jeer waxay noqon doontaa hore. fahanka daba imanaya. Rumaysad waad garan doontaa.
Si aan la yaab weyn
Waxa ay ahayd in 2017 in aan helay inaan la yaab leh in ay jiraan kuwa rumeeyey in dhulka uu yahay guri. Waxaa jira kuwa aan Masiixiyiinta ah kuwaas oo rumaysan, iyo in aan la yaab leh oo dheeraad ah, waxaa jira dadka Masiixiyiinta ah kuwaas oo aaminsan in!
Waxay ku doodayaan in ay tahay been conspiratorial maamulka our in dhulka uga jiri lahaa wareega. Waxay iska indha xaqiiqda ah in wakhtiga ay dadku rumaystay oo dhan oo dhulka ku wareegsan tahay. Xitaa Kitaabka Quduuska ah ka hadlaa dunida wareegsan.
Dhulku wuxuu guri ku wareegsan tahay
Ma ogtahay in sheeko abuuridda Kitaabka Bilowgii qeexayaa dhulka wareegsan? Haddii aan ka akhrino bokstsavligt Kitaabka Quduuska ah waxaan aragnaa in qeexayaa dhulka wareegsan, qorraxda meel wareegsan, moon wareegsan iyo xiddigaha ku wareegsan.
Waxaa jira kuwa ku jawaabay ka dib markii aan article ah oo ku saabsan dhulka cilmiga khatar guri in ay jiraan kuwa rumeeyey ee dhulka a flat iyo sidoo kale waxa ay dacaayad. Waxay u arkaan in ay aad u la yaab. Ka hor inta aan yimid guud ahaan this, anigu ma qabaa waxaa jiray si aad u badan kuwaas oo u maleeyay in dhulka uu ahaa guri.
Saaxiib Christian maleeyey in ay ahayd la yaab leh markii uu ku saabsan this akhriyey on site blog aan, laakiin markaas wuxuu iska heleen laba xabbadood ayaa ku qanciyey in dhulka uu yahay guri.
wakhti dheer ka hor waxaan arkay barnaamijka TV-a on caadi TV Swedish in uu ahaa ku saabsan koox Maraykan ah ayaa sheegay in Earth waa platt.De si buuxda ugu kalsoonahay in aannu la khiyaameeyay iyo in ay tahay been ugu weyn taariikhda iyo shirqool in dhulka uga jiri lahaa wareega. Waxa kale oo aan ku doodi karaa iyaga la waayo, waxay ka la dooday tusaale muran in Earth waa siman yahay. Farta aad waxaa jira sawiro si ay kaliya u ruxaya off by isagoo leh: "! Waxay yihiin photo booday"
Baddalayso text Kitaabka Quduuska ah
Haa waxaa jira xitaa Masiixiyiinta ah kuwaas waa adag ku qanacsanahay in dhulka uu yahay guri. Oo markay tixraac Kitaabka Quduuska ah. Waxaa jira dhulka guri rumaystayaasha kale ee ku dooda diimaha kale sida Islam iyo New Age in waxaa ka dhaadhacsan dhulka a flat. Waxa ay u muuqataa sida a Mu'miniinta dhulka guri waa ekumeniker ka dibna waxay ku heshiin karaan oo ku saabsan guri Earth ah.
Laakiin for Christian u leedahay in Kitaabka Quduuska ah si ay u dhigan tahay in dhulka uu yahay guri ka dibna waa uu u xumeeyaan qoraalka kitaabiga ah la taaban karo iyo waxa dhufsan macnaha. Si aad u akhriso Kitaabka Quduuska ah sida ay dhab ahaantii waa, aad aragto si cad in Kitaabka Quduuska ah barayaa in dhulka ku wareegsan tahay!
Dhab ahaantii aadan xataa u baahan tahay sayniska si ay u caawiyaan cadeeyo in dhulka ku wareegsan tahay. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in uu akhriyo Kitaabka Quduuska ah iyada oo da 'ahayd run, oo ay run tahay hadda.
Bal aynu eegno waxa Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in ku saabsan abuurka. Ilaah wuxuu abuuray dhulka bilowgii. ayuu Tani sameeyey maalinteedii kowaad. Afar maalmood ka dib, Ilaah wuxuu abuuray moon qorraxda iyo xiddigaha. Waxa ay ahayd iftiin ee waaweyn. Kitaabku waxa uu leeyahay in qorraxda ka ahaa ka weyn tahay dayaxa. Iyagu ma ay ahaayeen sida weyn.
The Mu'miniinta dhulka guri ay sheegayaan in Qorraxda iyo Dayaxa waa u siman yihiin oo ay leeyihiin meel fog ka mid ah ka Earth. Tani ma aha waafaqsan Kitaabka Quduuska ah. Baybalku wuxuu sheegay in moon uu yahay mid yar oo qorraxda ka sii. Sidaas daraaddeed waxay ku aan waa u siman yihiin.
Ee ah kuwa dhihi in Qorraxda iyo Dayaxa siman yihiin hadlo dhanka ah erayga Ilaah. Waxaa sidaas samayso Kitaabka Quduuska ah ku siinayaa xaq sayniska, iyo iyadoo jidka ag fadhida, markii aan ka fikiro waxa ku saabsan, in aad kaliya leeyihiin si ay u eegto Samada si ay u arkaan in ay yihiin of iskeel oo kala duwan oo kuwan jidhadhka samada way kala duwan yihiin.
Kuwani macallimiin been ah ayaa sidoo kale sheegaya in Qorraxda iyo Dayaxa yihiin wax la mid ah. Iyagu waa nooc ka mid ah iftiinka. Waxa kaliya in iftiinka dayaxa ee u iftiimaa wax yar taagta daran. Waxay ka dhigan tahay, in la yidhaahdo in dayaxa waa orb a gubanaya si la mid ah sida qorraxda. Haa runtii kubada u ololaysa. Waxay ku doodayaan in ay jirto iftiinka nalka diirada ah oo dhulka ku kor, ka dibna waxa ay sheegayaan in qorraxdu soo baxdo waa nooc ka mid ah nuurka iftiimay on Earth.
ilaa aynu eegnay qorraxda oo waannu aragnay in ay jirto kubad u ololaysa. Haddii dayaxa kaas oo sidoo kale noqon lahayd orb gubaya, sida sawirka ka mid ah dayaxa iyo craters ay noqon kartaa sanad isku sano ka dib? Waa maxay sababta ma beddeli muuqaalka dayaxa dayaxu wuxuu ka kooban yahay dhalisay dabka ololaya? Waxaa loola jeedaa in ay tahay been in moon uu ka tarjumayaa fallaaraha qorraxda ee xagga dhulka.
Si aad u hesho view this leedahay in la harjadayaan ku erayada Kitaabka Quduuska ah, iyo in ay dhab ahaan waxa ay sameeyaan marka ay isku dayayaan in ay ku qasbi view this by sheeganaya in Eebe u abuuray labada iftiin ee loo siman yahay. In si kale loo dhigo, iftiinka dayaxa si la mid ah sida qorraxda noqon, laakiinse tan aad leedahay si ay u xumeeyaan oo fahmi ereyga Ilaah miyir qabo in la isku keeno.
Marka Ilaah leeyahay oo ku saabsan nalalka in macnaheedu ma aha wax la mid ah in nooc ka mid iftiinka. Waxa uu sheegay in qorraxdu soo baxdo waa sare iyo Dayaxa ee u yar in qoraalka Kitaabka Qudduuska ah. Sidaas darteed waa laba nooc oo kala duwan oo iftiin.
Waxaa intaa dheer, Kitaabka Quduuska ah ma aha khuseeya cilmi ah. Kitaabka Quduuska ah waxaa ku qoran si aad u malaynayso in oo helo qaabka badbaadada waa xagga Ciise Masiix, oo ah Wiilka Ilaah. Taasi waa sababta Kitaabka Quduuska ah waxaa ku ballansan. Waxaa la ma ku qoran in la siiyo khuseeya cilmi ah. Laakiin line la helay sayniska. laba ma la hadli kartaa mid kasta oo kale.
Oo qorraxdii waxay ku talin lahaa maalinta iyo Dayaxa ee u talin lahaa habeenkii. Xitaa halkan waxaad ka arki kartaa in dhulka ku wareegsan tahay. Haddii kale waxaa habeen iyo maalinba ma noqon doono. Haddii aan akhriyo Kitaabka Quduuska ah sida ay tahay marka ay marnaba helo ganacsi funny. Laakiin marka aan bilaabaan in ay ku riday maanka iyo fikradaha aadanaha ka dibna waxa ay noqon doontaa waalan, oo waxaan ka heli kartaa khalad ah wax alla wixii. Waxay keeni kartaa een wax kasta, oo waannu aragnay tusaalayaal badan.
Flat kacsanaan Earth keenaysaa in bidcinimo wax kale. Waxay aaminsan yihiin in Yuhuudda waa xun dunida oo dhan ka dambeeya. Waxaan u imid inaan Mu'miniinta dhulka guri ma aaminsani in ay Holocaust, xasuuq Yuhuudda lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida, marka lix malyan oo Yuhuud ah ayaa la dilay sababtoo ah waxay ahaayeen Yuhuud.
Halkii, ay aaminsan yihiin in tani ay tahay been abuuray by aawadeed Yuhuuddu waxay isku si sidan ka heli damqasho si ay u soo celin kartaa si ay dalkoodii reer binu Israa'iil. Xitaa waa sidaa darteed mana rumeeyaan xaqa in ay tahay Ilaah cidda ka dambeeysa Land ee reer binu Israa'iil.
Iyagu ma ay rumaysan tahay in Ilaah siiyey Yuhuudda ee Israa'iil ee 1948. Halkii, ay aaminsan yihiin in ay tahay Ibliiska. Ha aad aragto samaynta dhulka aaminsan guri u horseedi karaa? - been Xitaa dheeraad ah iyo khayaanada!
Earth, qorraxda, dayaxa, xiddigaha
Haddaba bal aynu dib waxa erayga Ilaah ayaa sheegay tagaan. Waxay kuwa xaqa rumeeyay ee dhulka guri ka dhigan tahay in dhulka uu yahay disk guri ku wareegsan oo hoos u yahay. Waxay sidoo kale sheegeen in qorraxdu soo baxdo waa a disk wareega guri iyo Dayaxa, sidoo kale. Laakiin tani ma aha sidaas u fudud si aad u ogaato. Waxaa kaliya kor u eegay cirka ka soo Qorraxda iyo Dayaxa iyo waxaad arki doontaa in ay yihiin kubadaha wareegsan.
Haddaba, taxaddar marka aad aragtaan qorraxda. Waxa ay noqon karaan kuwo khatar ah in ay eegaan qorraxda. Waxaad noqon kartaa indha la '. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay si ay u leedahay ilaalinta weyn u indhahaaga marka aad aragtaan qorraxda.
Sida Qorraxda iyo Dayaxa ugu wareegsan yahay, markaa taasi waa dabcan sidoo kale dhulka ku wareegsan. Ma Ilaah saas ku jirio in uu abuuraa siyaabo kala duwan? Dabcan ma! The Earth iyo Qorraxda iyo Dayaxa ee u abuuray wareegsan. Ilaah ayaa ka mabda'a abuuridda iska socday. Waxa uu isticmaalaa mabda'a isku mid ah markii uu ku abuuray Dhulka, moon qorraxda iyo xiddigaha.
Waxaan leenahay in ay ka hor si Ilaah ee abuurka la isugu keeno dhulka a flat. Waa in aan sidaas daraaddeed tag ka dhan ah erayga Ilaah, waxa ku qoran oo ku saabsan sheekada iyo sheeko abuurniinta.
The Qoraxda iyo Dayaxa waxaan qiyaasi lahaa jeer, laakiin jeer, kuwaas oo lagu qabtay karaa oo kaliya haddii dhulka ku wareegsan tahay. Haddii kale, ma Tariikhda inay shaqada. Maalmo, iyo bilo marnaba la tirin karin haddii dhulka ku wareegsan oo ahaa.
Mar kale, waxaad arki hadda abuurka in Kitaabka Quduuska ah wuxuu qeexayaa dhulka wareegsan. Waxaa jira meelo kale ee Kitaabka Quduuska ah oo ku saabsan dhulka ku wareegsan laakiin xataa halkan horta jirridda Kitaabka tilmaamay dhulka ku wareegsan wareega iyo wax kale. Wuxuuna qeexayaa dhulka wareegsan sida ku tilmaamay moon wareegsan, iyo sidoo kale tilmaamay xiddigaha ku wareegsan. Tilmaan!
moon ayaa xiiso leh in la ogaado in dayaxa ma aha had iyo jeer ku wareegsan? Mararka qaarkood waxa kaliya bilaha ah. Mararka qaarkood waxa kaliya bilaha yar, iyo mararka qaarkood ma arki kartaa Dayaxa waqtiyo kala duwan oo dhan. Tani waa sababta dhulka midabo kala wareeg Moon ah. Waxa ay noqon doontaa wax aan macquul aheyn si aad u hesho hooskii noocan oo kale ah haddii dhulka lahaa wareega.
Si kor loogu qaado dhulka a flat ka dibna aad leedahay si ay u tagaan dhanka ah maskaxdaada. Waxaad si ay u tagaan ka dhanka ah waxa indhihiinnu waa arkaan oo Beeniyey xaqiiqada. CAQIIDADA ee xaqiiqada dhabta ah iyo waxay aaminsan yihiin waxa aad aragto, maxaa yeelay, aad qaldan ma noqon doonto.
Waxaan hadda leeyihiin in eegay abuurista Kitaabka Quduuska ah oo soo gabagabeeyey in Ilaah dadka ku abuuray dhulka ku wareegsan, qorraxda meel wareegsan, moon wareegsan iyo xiddigaha ku wareegsan. Ilaah ka hadlaa dunida wareegsan meelo kale ee Kitaabka Quduuska ah.
biyaha bannaanka ka sarreeyey
Ka hor inta aan loo soo afjaro this article, waa in aan ku xuso dhibic muhiim ah in dhulka Taageerayaasha guri highlight beeraha. Waxay sheegeen in ay dhulka ku fidsan, waa qubbad. Xamar waa samada, waxay dhihi, iyo wixii ka sareeya Xamar waxaa jira waxyaabo badan oo biyo ah.
Tani waxay u muuqan kartaa sida mar kasta oo waalan laakiin xaqiiqada ah waa in aad si dhab ah ka heli kartaa Qorniinku it on. Waa qoran tahay in Eebe u abuuray bannaani ku dhex jira oo biyo ah, iyo biyo ka soo soocay kor ku vault iyo biyaha hoos wareegga. Halkan dhulka guri rumaystayaal muran. Oo waxay u malaynayaan helay dood aad u fiican. Oo waa adag tahay in la beenayn haddii aad leedahay aqoon saboolka ah ee Erayga Ilaahay Kitaabka Quduuska ah. Waa dhab in text Kitaabka Quduuska ah in ay jirto biyo bannaanka ka sarreeyey.
Laakiin waxaan maanta ognahay in ay jiraan waa biyo ma jiro. Markay tageen inay moon ka 1969 si ay u 1972 si aan waxba u sheegay oo ku saabsan in ay ku socoto badda oo biyo ah bannaanka ka sarreeyey tegey. Sababta dabcan waa in ay jirto biyo ma jiro. Kitaabku waxa uu sharaxayaa hab aad u fudud sida wax run ahaantii ay yihiin. Sidaa darteed, waa in aan had iyo jeer ka akhrisan Kitaabka Quduuska ah. Haddaba, waxaan u hesho jawaabta.
Marka Ilaah wuxuu abuuray dhulka sida ay dhab ahaantii wuxuu ahaa biyaha ku wareegsan samada. Wax kale ma fahmi karno text Kitaabka Quduuska ah. Sidaasayna ahaatay, laakiin maxaa yeelay, waxaynu og nahay in biyaha ma jirtaa maanta, wax waa dhaceen in la waayay ka. Marka ay tani ka dhacay, iyo markii biyaha la waayay? Sidee taas ku dhacday? Bible ayaa jawaab fantastik ah.
Nuux iyo daadkii
Dadka ku noolaa dembiga, iyo dhulka dulmi baa ka buuxsamay iyo shar. Marka Ilaah go'aansaday in la burburiyo dhammaan nolosha on Earth by it barareyso biyo. Laakiin Ilaah ma aha Ilaaha ah dhiigyacabka ah oo raba in uu geeri lama filaan ah. No, isagu waa Ilaaha jacaylka oo doonaya in uu badbaadiyo iyo badbaadada. Sidaa darteed, waxa uu doonayay inuu badbaadiyo Nuux kan xaqa ah iyo qoyskiisa.
Taas waxaa la samayn doono, ayuu doonni, doon Rafaa dhisay. Waxay keeni lahaa laba lammaane oo dugaag kasta oo dhulka, oo ay sidaas u badbaadaan. Nuux dhisay sanduuqii, oo daadkii yimid. All nolosha aan ku jiray sanduuqii, dadka iyo xayawaanka labadaba, waana maanshaynay, lagu dilay oo waxay ku halligmeen markii daadkii yimid.
Marka daadkii yimid, waxaas la sameeyey si dhakhso ah. Si dhakhso ah dhulkiina waxaa ka buuxsamay by biyo. Earth ahaa caalamka oo biyo ah. Sidee ayaa dhulka waxaa ka buuxda u buuxsamay karaan biyaha? Sidee bay ku dhici iyo waxa sidee si degdeg ah u tagaan?
Kitaabku waxa uu leeyahay in Ilaah furay daaqadaha samada iyo ilaha qoto dheer. Markaasaa waxaa samada kor ku jiray biyo, bannaanka ka sarreeyey. Waa biyo ah in aan ku hadlay oo ku saabsan. Ilaah furay daaqadihii jannada si biyaha waayeen Wabiyo dhulka ku soo degay. Waxa uu miiro berkadood fudud jannada. Waxa uu miiro ee taangiyada biyaha jannada. Biyaha in uu ahaa kor samada iyo dhulka biyaha ka buuxsami doona biyo laga helay ilo u qoto dheer. Taasi waa sababta aynaan arkin biyo maanta bannaanka ka sarreeyey.
Kitaabku waxa uu mar walba jawaab u ah siin. Kitaabku waxa uu ku siinayaa iimaanka caafimaad. Ha aad u akhriyi ka dibna aad ma noqon doonto khalad.